Abanye abaSebenzisi beZithako eziSebenzayo nabaXhasi - iTshayina Ezinye iZithako zeZithako eziSebenzayo
I-Beta-Nicotinamide mononucleotide ("NMN", "NAMN", kunye ne "β-NMN") yi-nucleotide ethathwe kwi-ribose kunye ne-nicotinamide. Njenge-nicotinamide riboside, i-NMN sisiphumo se-niacin, kwaye abantu banee-enzymes ezinokusebenzisa i-NMN ukuvelisa i-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH).
I-Chlorphenesin ine-spectrum ebanzi kunye nokusebenza ngokugqwesileyo kwesakhono sokulwa ne-antibacterial, inefuthe elifanelekileyo kwi-bacteria ye-Gram-negative kunye ne-Gram-positive bacteria, isetyenziselwa ifungi ebanzi, iiarhente zokulwa neentsholongwane; Zokuthambisa kunye nokhathalelo lobuqu Kwenziwe ngesigcinakaliso sendalo iphela ukuphucula ukusebenza kwenkqubo yokulwa nokubola. Iiparameter zoBugcisa eziPhambili: Inkangeleko emhlophe okanye phantse umgubo omhlophe Uvavanyo 99% min. Indawo yokunyibilika 77 ~ 825, Ukucaca kwesoluti ...
I-Allantoin ikhutshwe kwingcambu yesityalo se-comfrey, i-Allantoin sisixhobo esingacaphukisi esithomalalisa isikhusela ulusu. Ngokwazi ukunceda ukuphilisa ulusu kunye nokukhuthaza ukukhula kwethishu entsha, yeyona nto ilungele ukugcina ulusu phezulu kumdlalo wayo. Ithambisa ngokufanelekileyo kwaye iyanceda ukukhusela ulusu, iyenze ilungele ulusu olubuthathaka. I-Allantoin sisithako esisebenzayo sesikhumba esine-keratolytic, ukuthambisa, ukuthomalalisa, iipropathi ezichasayo, ziyakhuthaza ...